Nnwom 40 NA-TWI - Ayeyi Dwom - Mede boasetɔ twɛnee - Bible Gateway
Nnwom 39Nnwom 41
Nnwom 40 Nkwa Asem (NA-TWI)
40 Mede boasetɔ twɛnee Awurade mmoa. Afei ɔtee me nne ne sufrɛ. 2 Oyii me fii amane amoa a ɛyɛ owu amoa mu. Ɔde me sii ɔbotan so a bɔne bi nka me. 3 Ɔkyerɛɛ me dwom foforo to; dwom a wɔde yi yɛn Nyankopɔn ayɛ. Dodow a wohu eyi no, ɛbɛbɔ wɔn kɔkɔ ma wɔde wɔn ho ato Awurade so. 4 Nhyira nka wɔn a wɔde wɔn ho to Awurade so na wɔmfa wɔn ho nto anyame so anaasɛ wɔmfa wɔn ho mmɔ wɔn a wɔsom anyame ho.